सैनामैनाका नागरिकको घरमै कोरोना परीक्षण सुरु, कहिले–कुन वडामा ? – Nepal Press
२०७८ माघ ५ गते ११:४०
रुपन्देही । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले कोरोनाका सम्भावित बिरामीको पहिचान गर्न घरघरमै पुगेर परीक्षण सुरु गरेको छ । अहिले कोरोना भाइरस र तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढिरहेकोले समुदायस्तरमा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन र संक्रमित व्यक्तिलाई छुट्टाएर आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्ने प्रयोजनका लागि एन्टिजेन परीक्षण गरिएको नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजदेखि समुदायस्तरमा एन्टिजेन परीक्षण सुरु भएको हो ।
कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुलाई तोकिएका स्थानमा आइ परीक्षण गर्न प्रमुख कार्कीले आग्रह गरे । आज बुधबार वडा नं. १ को कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म, वडा नं. २ को कार्यालयमा दिउँसो २ देखि ४ बजेसम्म परीक्षण गरिने भएको छ ।
त्यस्तै माघ ६ गते पर्रोहा स्वास्थ्य चौकी वडा नं. ३ का लागि बिहान १० देखि १२ बजेसम्म समय तोकिएको छ, भने वडा नं. ४ का लागि दिउँसो २ देखि ४ बजेसम्म सोही स्थानमा समय तोकिएको हो ।
माघ ७ गते वडा नं.५ को बुद्ध स्टार क्लब भवनमा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म र वडा नं. ६ को दुधराक्ष स्वास्थ्य चौकीमा २ देखि ४ बजेसम्म एन्टिजेन परीक्षण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै पालिकाका अनुसार माघ ९ गते वडा नं. ७ को वडा कार्यालय देउवापार र वडा नं. ८ को आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बाँसगढीमा परीक्षण गरिने छ । माघ १० गते वडा नं.९ को वडा कार्यालयमा बिहान १० देखि १२ सम्म र वडा नं. १० को वडा कार्यालयमा दिउँसो २ देखि ४ बजेसम्म परीक्षण हुने भएको छ । त्यस्तै माघ ११ गते वडा नं. ११ को कोटियादेवी मावि तालिमा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म एन्टिजेन परीक्षण हुनेछ ।
नगरपालिकामा हालसम्म ५७ हजार बढीले कोरोना भाइरस (कोभिड —१९) विरुद्धको खोप लगाएका छन् । नगरका ११ वटै वडाका गरी कुल ५७ हजार ६ सय ३९ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका हुन् ।
नगरप्रमुख कार्कीका अनुसार पहिलो खोप लगाउनेमा ४७ हजार ६ सय ४० जना रहेका छन् । जसमा १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका पनि छन् । त्यस्तै पहिलो खोप लगाउनेको विद्यार्थीको संख्या ९ हजार ९ सय ९९ रहेको छ ।
नगरमा पूर्णखोप अर्थात् दुवै खोप लगाउनेको संख्या ४२ हजार ३ सय १२ जना रहेको पालिकाले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २०७८ माघ ५ गते ११:४०